DSM – Page2– Daily Sports Myanmar
Daily Sports Myanmar
Enjoy Our Sports News
Articles by DSM
အသင်းဖော်ပေါဂ့်ဘာနဲ့တွဲကစားရမယ့် ခံစားမှုကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်
17/06/2020 DSM 0
ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ် က ဒဏ်ရာကနေပြန်သက်သာလာပြီး အသင်းမှာ လေ့က်ျင့်ခန်းပြန်ဆင်းနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ မားကပ်စ်ရရ်ှဖိုဒ့် နဲ့ ပေါဂ့်ဘာ တို့နှစ်ယောက်ကို အတူတွဲကစားဖို့ အတော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြောင်းနဲ့ သူတိူ့နှစ်ယောက်ဟာအသင်းကိုများစွာအကူညီပေးနိုငိမယ့်သူတွေ ဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။ ဘရူနို ရောက်ရှိပြီးနောက်ပိုင်း အသင်းက အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပေါဂ့်ဘာနဲ့ ရရ်ှဖိုဒ့် တို့ကတော့ ဒဏ်ရာကြောင့်မပါဝင်နိုင်ခဲ့ပဲ ယခုအချိန်မှသာ အတူတကွ ကစားနိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်နိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ […]
ယူနိုက်တဒ်ရဲ့ ဂန္တဝင်ကျောနံပါတ် (7) နဲ့ (11) ကို ဘယ်သူတွေဆက်ခံသင့်သလဲ ?
မန်ယူနိုက်တဒ် အသင်းနဲ့ပက်သက်ရင် ကျောနံပါတ် တွေကလည်း အရေးပါတဲ့နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နံပါတ် (၇) ဟာ အကောင်းဆုံးတွေသာ ဝတ်ဆင်လေ့ရှိခဲ့သလို အခြားသောကျောနံပတ် တွေဖြစ်တဲ့ (၁၁)၊(၁၀)၊(၉) တို့ဟာလည်း ယူနိုက်တဒ်မှာ ဂုဏိသိက္ခာ မြင့်မားတဲ့ ကျောနံပါတ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့်ရာသီအတွက် ကျောနံပါတ် (၇) ကို […]
ယူနိုက်တက်နဲ့ ဂျေဒန်ဆန်ချို အပြောင်းရွှေ့ဘာကြောင့်ကြန့်ကြာနေရတာလဲ ???
ဒီနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့မတိုင်ခင်ထဲက ပရိတ်သတ်ကြားထဲ ရေပန်းအစားဆုံးသတင်းကတော့ဂျေဒန်ဆန်ချို နဲ့ မန်ယူနိုက်တဒ် သတင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ယူနိုက်တဒ်ဘအနေနဲ့ အဂ်လန်တောင်ပံလူကို အမိမြေ ပြန်ခေါ်လိုနေပြီး အသင်းရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ နံပါတ်(၇) ရှာပုံတော် ကို လည်း ပိတ်သိမ်းချင်နေပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှား အနေနဲ့ သူ့လက်ထက်မှာ ငယ်ရွယ်ပြီး ရေရှည် အားကိုးရမယ့် အသင်းတစ်သင်းကိုတည်ဆောက်ချင်ခဲ့သလို လက်ရှိမှာလည်း […]
ဆန်းချက်ဇ်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အရိပ်အမြွက်ပြောလိုက်တဲ့ ဆိုးလ်ရှား
ယူနိုက်တဒ်နည်းပြဆိုးလ်ရှားကတော့ ချီလီသား အလက်ဆစ်ဆန်းချက်ဇ် အတွက် ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်အာမခံချက်ကပျောက်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပေမယ့်လည်း အသင်းမှာတော့ နေရာတစ်နေရာစာရရှိနိုင်သေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အင်တာမီလန်အသင်းကို ရာသီကုန်အထိ အငှားချထားပြီး လာမယ့်ရာသီအတွက် အဝယ်လက် ရှာဖွေနေတဲ့ ယူနိုက်တဒ် အတွက် ဆန်းချက်ဇ် ပြသနာ ဟာလည်း ကြီးမားတဲ့ဖိအားတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျောနံပတ် (၇) ကို ဆန်ချိုကိုပေးရမယ့်အပြင် ပေါဂ့်ဘာ […]
အသစ် အသစ်များစွာနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်
ယနေ့ညမှာ အာဆင်နယ် အသင်းနဲ့ မန်ချက်စတာစီးတီး အသင်းတို့ရဲ့ ပွဲကြီးပွဲကောင်းနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ် ဟာ ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါပြီ။ ဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ၊စပိန်လာလီဂါ၊အီတလီ စီးရီအေ တို့ ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်မှသာ အဂ်လန်ပရီးမီးယားလိဂ် ကပြန်လည်းစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အညးနည်းချက်တွေနဲ့ အမှားတွေကို လေ့လာပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ စည်းမျဉ်းအသစ်များစွာ ချမှတ်ထားသလို ကစားသမားတွေ၊နည်းပြတွေ အတွက်လည်း […]
ဘယ်လင်ဟမ်ကိုခေါ်ယူရေးမှာ ယူနိုက်တက်နဲ့ ဒေါ့မွန် ဘယ်သူအသာရနေပြီလဲ?
ဘာမင်ဂမ်စီးတီး အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား ဂျုဒ့် ဘယ်လင်ဟမ် ကို ခေါ်ယူရေးအတွက် ယူနိုက်တဒ် နဲ့ ဒေါ့မွန် အသင်းတို့ယှဉ်ပြိုင်နေမှု့မှာ ဂျာမန်ကလပ်ဖက်က အသာရနေပြီလို့ SportBild အဆိုရသိရပါတယ်။ ဂျာမဏီကလာတဲ့သတင်းတွေအရတော့ အဂ်လန် သားဟာ သူ့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားဘဝ တိုးတက်ရေးကို မန်ချက်စတာမှာထက် ဂျာမန်မြေမှာ ပိုမိုမြှပ်နှံလိုပြီး အီလန်ဟာလန်း၊ဂျေဒန်ဆန်ချိူ၊သော်ဂန်ဟာဇဒ်၊ဘရန့်၊ဟာကီမီ […]
လီဗာပူးလ်နဲ့မန်စီးတီးကို စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ အကူအညီပေးမယ့် သရဲနီကစားသမားရဲ့အမည်ကို ဖီးလ်နဗီးလ်ဖွင့်ဟ
ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ အဓိကကွင်းလယ်လူပေါ့ဘာက နောက်ရာသီမှာ မန်စီးတီးနဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းတို့ကို စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ အသင်းကို ကောင်းကောင်း အကူအညီပေးသွားမယ်လို့ ကစားသမားဟောင်းဖြစ်သူ ဖီးလ်နဗီးက ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှားကိုယ်တိုင်ကလည်း ပေါ့ဘာနဲ့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်အတွဲအဖက်ကို အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်အတွဲအဖက်အဖြစ်မှတ်ယူထားပြီး ဆုဖလားစိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ အကူအညီပေးသွားလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။ ဒီရာသီမှာ ကာလရှည်ဒဏ်ရာရနေခဲ့တဲ့ပေါ့ဘာဟာ ကြံ့ခိုင်မှု ပြည့်ဝလာပြီဖြစ်ပြီး ပြန်လည်စတင်မယ့်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲမှာ ပါဝင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ […]
အသင်းသားတဦးပြန်လာခြင်းဟာ ဆိုးလ်ရှားအတွက် အကောင်းဆုံးကစားသမားကို အသစ်ခေါ်လိုက်သလိုပဲဆိုတဲ့ ရပ်နပ်
ကာလရှည်ကြာ ခါးဒဏ်ရာကနေ ပြန်လည်သက်သာလာပြီး အသင်းနဲ့အတူပူးပေါင်းနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ မားကပ်စ်ရရ်ှဖိုဒ့် ကြောင့် ယူနိုက်တဒ် အနေနဲ့ ကစားသမားအသစ်တစ်ယောက် ထပ်ရလိုက်သလို အင်အားတောင့်တင်းသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ မားကပ်စ်ဒဏ်ရာရနေချိန်အတောအတွင်းမှာ ယူနိုက်တဒ်ရဲ့ရလာဒ်ပိုင်းက အကောင်းဖက်ကိုဦးတည်နိုင်ခဲ့သလို ယူနိုက်တဒ် အတွက် ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ မားကပ်စ်ပြန်လာတာ က အသင်းကိုများစွာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်နပ်က ” အခုလက်ရှိမန်ချက်စတာယူနိုက်တဒ်အသင်းကိူ ကြည့်လိုက်ပါ။သူတို့ရဲ့ […]
မားကပ်စ်ရရ်ှဖိုဒ့် တောင်းဆိုချက်ကို အသိမှတ်ပြု လက်ခံခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်အစိုးရ
မန်ယူနိုက်တဒ် တိုက်စစ်မှုး မားကပ်စ်ရရ်ှဖိုဒ့်ရဲ့ ကလေးများအတွက် အခမဲ့အစားစာဝေငှရေးအစီစဉ်အတွက် အစိုးရထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆင် ဦးဆောင်တဲ့ ဗြိတိန်အစိုးရ က လက်ခံခဲ့ပြီး ရရ်ှဖိုဒ့်တောင်းဆိုတဲ့ U-turn အစီစဉ် ကို ပြုလုပ်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒေါင်းနင်းလမ်းအခြေစိုက် ဗြိတိန်ပါလီမန် ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆင် အစိုးရ အနေနဲ့ […]
အက်စတွန်ဗီလာအသင်းဟာ အပြောင်းအရွှေ့တွင် ကွင်းလယ်လူ ဂျက်ဂလေးလစ်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးကို အနည်းဆုံး ပေါင် သန်း ၈၀ တောင်းဆိုသွားဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်က ၎င်းကို ခေါ်ယူဖို့ ထိပ်ဆုံးကရေးပမ်းစားနေပြီး ပစ်မှတ်စာရင်းမှာ ထိပ်ပိုင်းမှာရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ သောကြာနေ့ည(1) နာရီ (45) မိနစ်တွင်ကစားမည့် စပါး- ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ်ကို ဒိုင်လူကြီးအဖြစ် Jonathan […]
ဒဏ်ရာရကစားသမားတွေနဲ့စာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ကစားသမားတွေအကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ဆိုးလ်ရှား
ယူနိုက်တဒ်နဲ့ဂရေးလစ်ရ်ှတို့ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့နောက်ဆုံးရ အခြေအနေ
ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးလိုက်တဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်
စည်းမျဉ်းသစ်များနဲ့အတူ ယူရိုပါလိဂ် ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမယ့် နေ့ရက်များ
နံနက်ခင်း ယူနိုက်တက် သတင်းတိုများ